Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Delhi Waxay Ku Wajahantahay Tirada Hudheelada 5-Xiddig ee La dhimay
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Hindiya • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Ururka Hudheelada iyo Makhaayado ee Waqooyiga Hindiya waxa uu dhaleecaynayaa qaab dhismeedka khidmadaha isku dhafan ee lagu soo bandhigay siyaasadda cusub ee badeecadaha ee Delhi.
Inta badan xubnaha hoteelka ayaa muujiyay walaaca ay ka qabaan canshuuraha cusub ee Delhi kaas oo la dhaqan gelin doono laga bilaabo Noofambar 17, 2021.
Qaab dhismeedka khidmadda cusub ayaa hubaal ah inay saameyn doonto sawirka Delhi iyadoo la dhimay tirada hoteellada 5-xiddigaha ah.
Hudheelo badan ayaa raba in qiimahooda laga dhigo ama laga dhigo 4-xiddig sababo la xiriira qaab dhismeedka cusub ee khidmadaha isku dhafan ee 1 crore sanadkiiba.
Sida ku cad siyaasadda cusub ee cashuur-dhaafka, waxa jira kala-qaybsanaan buuxda oo ah khidmadaha. Hudheelada ilaa heerka labada xidigood, khidmadu waa INR 10 lakh iyo huteelada saddexda iyo afarta xidigoodba, waa INR 15 lakh halkii F&B. Halka shatiga cusub ee L-16 (5-xiddigle iyo wixii ka sareeya) uu yahay shatiga isku dhafan ee INR 1 crore taaso ka dhigan in hotel ka kooban labo xarumood iyo mid kale oo leh lix xarumood ayaa laga qaadayaa lacag isku mid ah nidaamka isku dhafan. Banquets-ka hudheelka waxa lagu daweeyay aqoonsi gaar ah iyo liisan u gaar ah (L-38) iyadoo laga qaadayo khidmad ku salaysan roogaga (Rs 5,00,000 ilaa Rs 15,00,000/- waxa kale oo dalbaday waaxda cashuuraha). .
Waajibka shatiyada 24×7 ee adeega khamriga ayaa sidoo kale lagu daray oo lagu dhaqan galiyay khidmada isku dhafan iyada oo aan la tixgalinayn deegaanka / aagga ama baahida 24 × 7 adeegyada khamriga iyo doorashada qaybta shatiga.
Wakiillo dhowr ah ayaa loo diray ku xigeenka madaxa maaliyadda oo isna madax ka ah. Kulanka daneeyayaasha iyo waftiga Ururka ayaa la kulmay waaxda Excise si ay dib ugu eegaan siyaasada laakiin ma jirto jawaab wanaagsan oo uu sheegay Renu Thaplial, Xoghayaha Guud, HRANI. Waxaa muhiim ah in la sheego in hordhaca khidmadaha isku dhafan aysan soo jeedin Waaxda Canshuuraha ama aan lagu darin qabyo qoraalka siyaasadda canshuur-dhaafka ee la soo saaray faallooyinka dadweynaha/ warshadaha ayaa ku daray Renu.
Qaab dhismeedka khidmadda isku-dhafka ah ee la soo jeediyay ayaa hubaal ah inay saameyn doonto hoteelada leh cabbirro kala duwan maadaama cutubyo leh tiro xaddidan oo unug ah ay ku adkaan doonto inay dib u soo ceshadaan kharashka shatiga. Waxaa jira sare u kac weyn oo ah kharashka shatiga ee dhammaan qaybaha ayuu yiri Garish Oberoi, Guddoomiyaha Guddiga Gobolka Delhi, HRANI.
"Waa wax aad u wanaagsan in shatiga isku-dhafka ah ay bilawday Dawladda Delhi, laakiin kharashyo dheeri ah oo ku saabsan adeegga qolka iyo kharashka shatiga sanadlaha ah ee diyaafadda ilaa Rs 15 lacs ayaa sidoo kale si buuxda u jabinaysa shatiga isku dhafan. Deris ma jirto gobolka Delhi uu leeyahay khidmadaha xad dhaafka ah iyo hirgelinta khidmadaha xad-dhaafka ah waxay keeni doontaa in ganacsiga loo wareejiyo NCR iyo dawladaha deriska ah," ayuu raaciyay Mr. Oberoi.
Ma jirto wax caddayn ah oo ku saabsan soo iibinta khamriga ilaa taariikhda. The Hoteelada ayaa waxaa soo food saartay caqabado oo leh bogga internetka ee waaxda canshuuraha. Wershadaha kuma cadda adeegga khamriga iyo soo iibinta xafladaha martiqaadka maadaama xilliga arooska uu hadda socdo.
Xubnaha huteelka ayaa sidoo kale ku wargeliyay Ururka in sida ku cad xeerka la soo jeediyay, martida macaamiisha ah ee doonaya in ay helaan khamriga loogu adeego hawlahooda / dhacdada ay sidoo kale qaataan shati ku meel gaar ah Rs 50,000 / - intaa dheer oo iibsadaan. khamriga ka yimid iibka loo qoondeeyey taas oo macnaheedu yahay in martida u soo degi doonaa in ka badan xagga adeegga khamriga. Siyaasaddan oo kale waxay horseedi doontaa isbeddel ku yimaada xafladaha diyaafadaha ee ka baxsan Delhi.
Sida ku cad Amarka Xukuumadda Delhi No F.No 10 (39) ENV 2021/4941-4970 ee ku taariikhaysan 13th Noofambar, 2021, dhammaan xafiisyada dawladda ee Delhi waa la xidhay ilaa 17.11.2021, sidaa darteed wax caddayn ah lagama weydiin karo saraakiisha hoteelada shatiga leh. Taariikhda Noofambar 17, 2021, hirgelinta siyaasadda waa in lagu kordhiyo hal bil hoteelada.
Maaddaama, Delhi ay tahay albaabka Hindiya iyo inay soo jiidato dalxiisayaasha imanaya magaalada, waa inaan la qabsanaa waqtiyada casriga ah oo aan wax ka beddelno siyaasadeena si aan uga dhigno kuwo xor ah, wax ku ool ah oo la mid ah heerarka caalamiga ah, oo leh waqti dheer sida ay ogol yihiin dawladaha kale .
Ururku wuxuu rajeynayaa in Xukuumadda Delhi ay siin doonto caasimadda, dareen caalami ah oo caalami ah si loo ilaaliyo martigelinta iyo dalxiiska.
Sida ku cad Amarka Xukuumadda Delhi No F.No 10 (39) ENV 2021/4941-4970 ee ku taariikhaysan 13th Noofambar, 2021, dhammaan xafiisyada dawladda ee Delhi waa la xidhay ilaa Noofambar 17, sidaa darteed wax caddayn ah lagama weydiin karo mas'uuliyiinta shatiga haysta hoteelada. Taariikhda Noofambar 17, 2021, hirgelinta siyaasadda waa in lagu kordhiyo hal bil hoteelada.